သူတို့ရဲ့ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရအကောင်းဆုံး NETFLIX မူရင်းစီးရီး - သတင်း
အဆင့် - ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများအရအကောင်းဆုံး Netflix မူရင်းစီးရီး
Netflix တွင်ကြည့်ရှုမည့်အရာအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပြပွဲအသစ်ဘယ်လောက်ပဲထပ်ထည့်ပါစေ၊ သင်အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကြွေးကြော်သံကိုထိုင်ပြီးထိုင်ကြည့်နေတုန်းပဲ လုံးဝဘာမျှမ စောင့်ကြည့်ဖို့။ ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးသည်သင်၏အကောင်းဆုံးပြသနာများအတွက်အဖြေဖြစ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Netflix မူရင်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာကြည့်ဖို့တစ်ခုခုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေလျှင်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း site ကိုအပေါ်အမြင့်ဆုံးဂိုးသွင်းသည့်စီးရီး၏အဆင့်မှထိပ်တန်း 20 ဖြစ်ကြသည်။ ဤအရာကိုဖတ်ပါ၊ ပြီးနောက်တစ်ခုချင်းစီကိုသင်၏စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲသို့ထည့်ပါ။
20. ရုရှား Doll
2019 Netflix မူရင်းစီးရီး၊ ရုရှားအရုပ်တွင်ပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးသည် ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။ Netflix ရဲ့အနှစ်ချုပ်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ် - Nadia ဟာသူမရဲ့ ၃၆ နှစ်မြောက်ပါတီကိုဆက်ပြီးအသက်ဆက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်တယ်။ သူမသည်တစ် ဦး လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်အချိန်ကွင်းဆက်ထဲမှာပိတ်မိနေ - နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သေဆုံးမှု၏စည်ကိုဆင်းစိုက်ကြည့်။
2017 စီးရီး Mindhunter သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သော၊ ၎င်းသည် 1996 မှ Mind Hunter: FBI ၏ Elite Serial Crime Unit အတွင်း၌အထူးအေးဂျင့်ဂျွန်ဒေါက်ဂလပ်နှင့်မာ့ခ်အိုရှakerတို့ကအခြေခံသည်။ ဒါဟာပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးအပေါ်အဆင့် 97 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်။
လူသတ်မှု၏စိတ်ပညာကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုသိပ္ပံကိုချဲ့ထွင်သည့် FBI အေးဂျင့် ၂ ဦး ၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ လူသတ်သမားအသစ်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်အခြားအဖွင့်အမှုများအားဖြေရှင်းရန်အတွက်အေးဂျင့်များအားအမှတ်စဉ်လူသတ်သမားများအားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြင့်တာ ၀ န်ပေးထားသည်။ ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ထားခဲ့ပါ။ လူသတ်သမားများအဘယ်ကြောင့်သူတို့လုပ်ကြသည်ကိုသူတို့ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်သူများနှင့်စကားပြောဆိုရမည်။
Lovesick သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ Netflix ၏အနှစ်ချုပ်တွင်ဤသို့ဖတ်ရသည် - စစ်မှန်သောအချစ်ကိုရှာဖွေရန် Dylan သည်ကလျမီဒီရာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်း Evie နှင့်လုကာတို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးသူသည်ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားအသိပေးရန်အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။
17. Tuca နှင့် Bertie
ဤ 2019 စီးရီးသည်ငှက်များ၊ Tuca နှင့် Bertie အကြောင်းကာတွန်းဖြစ်ပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးအကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျပန်းနည်းနည်းနှင့်ထူးဆန်းနေဟန်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများ၌ ၉၈ ရာနှုန်းရှိသည်။ ထိုလူများသည်ဘယ်သောအခါမျှမှားယွင်းမည်မဟုတ်ပါ။
တောရိုင်းတောရိုင်းနိုင်ငံသည်တစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံး Netflix မူရင်းစစ်မှန်သောရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးများသည်အဆင့် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
ဒါဟာအငြင်းပွားဖွယ်အိန္ဒိယဂုရု Bhagwan Shree Rajneesh အကြောင်းခြောက်ပိုင်းစာရွက်စာတမ်းများ။ သူသည်အော်ရီဂွန်သဲကန္တာရတွင်မြေကွက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် Utopian လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည်နေထိုင်သူ ၇၀၀၀ ကျော်အတွက်အိမ်အသစ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အစားအစာထောက်ပံ့ရေး၊ ရဲနှင့်မီးသတ်ဌာနများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ လေဆိပ်အသေးလေး။
သို့သော်တင်းမာမှုကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်နှစ်မျှသာဖန်တီးခဲ့သည်။ Netflix ၏အဆိုအရဤပconflictိပက္ခသည်အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အရိုင်းစိုင်းဆုံးဖြစ်ရပ်များဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မြေယာအသုံးပြုမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေများ၊ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ဖိနှိပ်မှု၊ ဇီဝစစ်ဆင်ရေး၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြိုးပမ်းမှုများ၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊
သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ Instagram မည်သို့ရှုမြင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Happy Valley တွင်ခရမ်းချဉ်သီး ၉၈ ရာနှုန်းရှိသည်။ အဆိုပါပြပွဲကိုလည်းငါး BAFTAs အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Netflix ၏အနှစ်ချုပ်ကဤသို့ဆိုသည် - Yorkshire ရဲတပ်ကြပ်ကြီး Catherine Cawood သည်သူမ၏ကွယ်လွန်သူသမီးကိုစော်ကားသူအားလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်း၊ သူသည်ယခုလျှို့ဝှက်ပြန်ပေးဆွဲရန်ကြံစည်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိမထားမိဘဲ
မယုံနိုင်စရာနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးစစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုစီးရီး ။ ဒါဟာအပေါ်အခြေခံပြီး dramatized စီးရီးဖြစ်ပါတယ် 18 နှစ်အရွယ် Marie Adler ၏ဖြစ်ရပ်မှန် ။ မာရီကသူမသည်သူမ၏တိုက်ခန်းရှိဓားထိုးချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက်သူမကရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာသူသည်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးအကြီးအကျယ်အမှားကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူမသည်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
မာရီကို Netflix ရဲ့ရှစ်ဇာတ်လမ်းတွဲစီးရီးမယုံနိုင်စရာ Katilyn Dever အားဖြင့်ကစားနေသည်။ ပြပွဲတွင်သူမသည်အေးခဲနေသောအဖြစ်အပျက်ကိုရဲကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောရန်တောင်းဆိုသည်။ သူနှင့်အနီးဆုံးသူများနှင့်ရဲများကသူမ၏ဇာတ်လမ်းကိုအစဉ်အမြဲသံသယဝင်ခဲ့ကြသည်။ 2019 စီးရီးများသည်ပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးများပေါ်တွင်ရမှတ် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
2017 စီးရီး, အမေရိကန် Vandal, စစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဟာသသရော်စာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနှစ်ချုပ်ဖတ်: သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအပြီးတွင်, ပေတရုနှင့်ဆမ်အသစ်တခုအမှုရှာခြင်းနှင့်ဝါရှင်တန်အထက်တန်းကျောင်းမှာအစာအိမ် - အလွန်အမင်းနက်နဲသောအရာအပေါ်အခြေချ။ ဒါဟာ 98 ရာခိုင်နှုန်းမှာအဆင့်။
12. Alias ​​ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
Alias ​​Grace သည်ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများပေါ်တွင် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည်။ အဆိုပါရာဇဝတ်မှုဒရာမာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကပြောပါတယ်: 19 ရာစုကနေဒါမှာတော့စိတ်ရောဂါတစ် ဦး လူသတ်မှုရူးသွပ်မှုမှလွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်ရှိမရှိအလေးချိန်။ မာဂရက် Atwood ရဲ့ဆုရဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည်။
တစ်ကြိမ်မှာတစ်နေ့တာဟာဟာသဒရာမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Norman Lear ရဲ့ ၁၉၇၅ တူညီတဲ့နာမည်ကမှုတ်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြည်းတပ်အသစ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနှင့်သူမ၏ကျူးဘား - အမေရိကန်မိသားစု၏ဘဝနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ အနှစ်ချုပ်ကဤသို့ဆိုထားသည် - တီဗီဂန္ထဝင်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ခြင်းတွင်လက်တင်အမေရိကအသစ်ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်ဖြစ်သူသည်သူမ၏သမီးဟောင်းနှင့်သမီးတဆယ်တို့ကိုသူမ၏ဟောင်းကျောင်းမှအမေ၏အကူအညီဖြင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
အကောင်းဆုံး Netflix မူရင်းထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင် Crazyhead သည် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်ရရှိသည်။ ဗြိတိသျှမှောင်မိုက်ဟာသသည်နတ်ဆိုးမုဆိုးနှစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကအမျိုးသမီးနှစ် ဦး နဲ့ပကတိနတ်ဆိုးများအပြင်သူတို့ရဲ့နတ်ဆိုးများကိုပါအနိုင်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Misfits ကိုဖန်တီးသူမှလာသည်။
2019 စစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုစီးရီး အဆိုပါဝန်ခံချက်လူသတ်သမား ထို့အပြင်ရာနှုန်း 100 ရာခိုင်နှုန်း။ အပိုင်းငါးပိုင်းပါသည့်စီးရီးသည်ဟင်နရီလူးကပ်စ်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်။ သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးအမေကိုသတ်မှုဖြင့်ထောင်ကျခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက်သူ၏ရည်းစားနှင့်အိမ်ရှင်၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူထောင်ထဲမှာရှိနေတုန်းသူကသတ်ဖြတ်မှုတွေထပ်ပြီးဝန်ခံခဲ့တယ်။ ထို့နောက်အရေအတွက်သည် ၁၀၀ အထိ၊ ထို့နောက် ၁၅၀၊ ထို့နောက် ၃၀၀ အထိတက်လာပြီးလူးကပ်စ်ကသူသည်အမေရိကတစ်ဝှမ်းသေဆုံးမှုပေါင်း ၆၀၀ ကျော်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုမကြာမီကပြောကြားခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာတော့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်ပုံရသည် - သူတို့သူတို့မယ်လို့ထင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရာပေါင်းများစွာဖြေရှင်းပြီးပြီ။ ၎င်းသည်ဟင်နရီလူးကပ်စ်ဖြစ်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ သူသည်ရဲကိုရာဇ ၀ တ်မှုများအဖြစ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြနိုင်ပြီးအချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်သားကောင်များကိုပင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသလိုပဲအားလုံးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာသူ့ကိုဤအရာအလုံးစုံရာဇဝတ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ခြင်းရုံမဖြစ်နိုင်ခဲ့ကွောငျးမကြာမီဖွင့်လှစ် သူသည်ဖြစ်ရပ်များအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သောနေရာအမျိုးမျိုးသို့သွားရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဖြစ်နိုင်သည့်အပြင်သက်သေအထောက်အထားများလည်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးသူ၏ဝန်ခံမှုများကိုမှားယွင်းစွာဖြစ်စေခဲ့သည်။
Dirty Money သည် Netflix မူရင်းစီးရီးဖြစ်ပြီးကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ၊ Rotten Tomatoes သည်၎င်းကိုအော်စကာဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်ဒါရိုက်တာအဲလက်စ်ဂစ်ဘီနီမှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစီးရီးအဖြစ်ဖော်ပြပြီး၎င်းသည်စီးပွားရေးလောက၏အရှုပ်တော်ပုံနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကိုမရေမတွက်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ကိုဖော်ပြပေးပြီး ၁၀၀ ရာနှုန်းရသည်။
သည် eurovision အတွက်သီဆို ferrell ပါလိမ့်မယ်
Giri / Haji သည်တိုကျိုနှင့်လန်ဒန်တို့တွင်လူသတ်မှုတစ်ခု၏လိပ်ပြာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှာဖွေပြီး၊ ၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ရွေးနုတ်ခြင်းကိုမှောင်မိုက်။ လိမ္မာပါးနပ်။ ရဲရင့်စွာစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဒါဟာထိပ်တန်းလူတန်းစားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 100 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။
Ugly Delicious သည်ချက်ပြုတ်သည့်အချိုရည်ဖြစ်သည်။ ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့်စားဖိုမှူးဒေးဗစ်ချန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချက်အပြုတ်ဟော့စပေါ့များသို့လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီသည်မတူကွဲပြားသောပန်းကန်သို့မဟုတ်အစားအစာဆိုင်ရာအယူအဆကိုအာရုံစိုက်ပြီးအရသာအပေါ်တွင်လုံးလုံးလျားလျားအာရုံစိုက်သည် - အမြဲကြည့်လေ့မရှိ။ အဆိုပါ Voice ကိုအစားအစာနှင့်ပတ်သက်။ လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဒါဟာပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးရာခိုင်နှုန်း 100 ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါတယ်။
Chewing Gum သည်ဘာသာရေး၊ Beyonce ၏အစွဲအလမ်းနှစ်ဆယ့်ခြောက်ရာ Tracey Gordon အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောဟာသစီးရီးဖြစ်သည်။ သူသည်ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလေလေ၊ သူမနားလည်လေလေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒါဟာပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးအပေါ်ထိပ်တန်းရမှတ်ရှိတယ်။
Feel Good သည်ကနေဒါလူရွှင်တော်မဲမာတင်၏ခြောက်ပိုင်းခွဲခြယ်မှုပြသည့်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မယ်တော်နှင့်ရည်းစားအသစ်ဂျော့ခ်ျနှင့်သူမ၏ဆက်ဆံရေးကိုဗဟိုပြုသည်။ ဘ ၀ ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များမစခင်တွင်၎င်းတို့သည်အသစ်သောဆက်ဆံရေးအသစ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသေးသည့်အပြင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိကြသည်။ ပို။ ပင်ကွဲလွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောကြောင့်, ဂျော့ခ်ျရဲ့အခွအေနေသူမကသူမ၏မိသားစုနှင့်အတူမယ်မိတ်ဆက်ဖို့ကြောက်တယ်။ မယ်တော်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအမည်မသိအစည်းအဝေးများသို့ပြန်လည်တက်ကြွနေသည့်မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။
၎င်းကို UK ရှိ 4OD နှင့်ကျန်ကမ္ဘာ့အခြား Netflix တွင်ရရှိနိုင်သည်။
3. နက်နဲသောအရာသိပ္ပံပြဇာတ်ရုံ 3000: ပြန်လာ
ဒီသိပ္ပံဝတ္ထုဟာသကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Netflix တွင်ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးရာခိုင်နှုန်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းရခဲ့သည်။ အဆိုပါအနှစ်ချုပ်ဖတ်: အဆိုပါအစွန်းရောက် hit ပြန်လာ! ရူးသွပ်သောသိပ္ပံပညာရှင်များဖမ်းဆီးရမိသောအိမ်ရှင်အသစ်ဖြစ်သော Jonah သည်သူ၏ရယ်စရာစက်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူရစ်ဝဲခြင်းဖြင့်ချိစ်ခ B ရုပ်ရှင်များကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။
ပါးစပ်ကြီး အားလုံးသောအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဟော်မုန်းနဂါးနှင့်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကိုဖြတ်သန်းသည်။ ဘယ်ထူးဆန်းပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကစတီးရွိုက်ပေါ်လိင်ပညာရေးကိုကာတွန်းပုံစံနဲ့တူတယ်။ ၁၀၀ ရာနှုန်းနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောစီးရီးတွင်အနှစ်ချုပ်များပါရှိသည် - အစစ်အမှန်ဘဝဖော်ဆောင်မှုများဖြစ်သော Nick Kroll နှင့် Andrew Goldberg မှဆယ်ကျော်သက်သူငယ်ချင်းများသည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း၏အံ့ and ဖွယ်ရာများနှင့်အလွန်အမင်းကြောက်မက်ဖွယ်ရာများကြောင့်သူတို့၏ဘ ၀ များကိုတွေ့ရသည်။
ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ Netflix မူရင်းအားလုံး၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သောအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီဟာသမှာ Aziz Ansari ပါ ၀ င်ပြီး ၂၀၁၅ မှာပထမဆုံးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်နယူးယောက်သရုပ်ဆောင်နှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရသည်။ သူ၏စမ်းသပ်မှုများသည်လူဝင်မှုအတွေ့အကြုံမှသူသည်ညစာအတွက်စားသင့်သောခေါက်ဆွဲများအထိဖြစ်သည်။
Rotten Tomatoes အရအကောင်းဆုံး Netflix မူရင်းများ၏အဆင့်ကိုကြည့်ပါ။
• ဤ ၁၅ Netflix ပြပွဲသည်သင့်ဖုန်းကိုအများအားဖြင့်ကြည့်နေစဉ်ကြည့်ရှုရန်ပြီးပြည့်စုံသည်
• ဤ ၁၅ Netflix ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ကားများသည်အားနည်းသောသူများအတွက်မဟုတ်ပါ